သူ့ကို ဆဲ တဲ့ အကောင့်တွေ ကို ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကြောင့် အကုန်မှတ်ထား တဲ့ ယောကီး – Shwewiki.com
သူ့ကို ဆဲ တဲ့ အကောင့်တွေ ကို ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကြောင့် အကုန်မှတ်ထား တဲ့ ယောကီး
ယမန်နေ့ညက Myanmar Idol Season4ရဲ့ Result Show ကြီးကတော့ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ…. ပြိုင်ပွဲဝင် ၅ ဦးထဲမှာ ယောကီးကတော့ Vote အနည်းဆုံးသာရရှိတာ ဖြစ်လို့ ပြိုင်ပွဲကနေ နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်….ယောကီးဟာလည်း ပရိသတ်တွေ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်တစ်ဦး ဖြစ်ပေမဲ့ Vote အနည်းဆုံးတစ်ယောက်ကတော့ မဖြစ်မနေထွက်ရမှာမို့ နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့ရတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
ပြိုင်ပွဲကနေ ထွက်ခွာခဲ့ရပေမဲ့ ယောကီးဟာ တခြားပြိုင်ပွဲဝင်တွေနဲ့ မတူဘဲ သူ့ရဲ့ နှုတ်ဆက်စကားတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေ ဒိုင်တွေ သာမက ပြိုင်ပွဲဝင်အချင်းချင်းတောင် ရယ်မောပြုံးပျော်အောင် နှုတ်ဆက်စကားဆိုနိုင်ခဲ့သူပါ…ပြိုင်ပွဲကနေ ထွက်ခွာခဲ့ရပေမဲ့ ငိုကြွေးခြင်းမရှိဘဲ တကယ့်ကို လေးစားဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် အများကို ရယ်မောပျော်ရွှင်အောင် နှုတ်ဆက်သွားနိုင်ခဲ့သူပါ…ဒါဟာ ယောကီးရဲ့ ရိုးသားတဲ့စိတ်ကို ဖွင့်ဟ ပြသလိုပါပဲ…
ယောကီးဟာ သူ့ကို လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကနေ ဝေဖန်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့ရဲ့ အမြင်ကိုလည်း အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်….သူများတွေက Comment တွေ လိုက်မဖတ်ဖို့ သူများဆဲတာတွေ မကြည့်ဖို့ တားပေမဲ့ ယောကီးကတော့ Comment တွေ အကုန်ဖတ်ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်….
ဒါ့အပြင် သူ့ကို ဆဲတဲ့ Account တွေကိုလည်း မှတ်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်…ဒါဟာလည်း ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်…ဘာလဲဆိုတော့ နောင်တစ်ချိန်မှာ အဲဒီအကောင့်တွေနဲ့ ခင်နိုင်အောင်ကြိုးစားမှာ ဖြစ်ကြောင်း ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေနိုင်အောင် ကြိုးစားချင်တာကြောင့် ခုလို Account တွေ မှတ်ထားတာလို့ ဆိုပါတယ်..
တကယ့်ကို စိတ်ရင်းရိုးသားဖြူစင်တဲ့ ယောကီးလို့ ဆိုရမှာပါ…. ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ယောကီးတစ်ယောက် ဘယ်လိုတွေတောင် ရိုးသားဖြူစင်လည်းဆိုတာ သိဖို့ အောက်မှာ အင်တာဗျူးထားတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ပြန်လည်မျှဝေလိုက်ပါတယ်နော်…ယောကီးရဲ့ ဖြူစင်ရိုးသားမှုကို သဘောကျရင် မှတ်ချက်လေးတွေ ရေးပေးခဲ့ပါအုံး..
Video Source : PannPwint
ဆူ ဇူ ကီး ကား အသစ်ကြီး ထောက်ပံ့ခြင်း ခံ လိုက်ရတဲ့ မြန်မာ့ ကြက်တောင်မယ် သက်ထားသူဇာ
ဘဝခြား သွား တဲ့ချစ်သူ နဲ့ စုံတွဲဓာတ်ပုံတွေ ကို နေ့တိုင်းတင်ပြီးလွမ်းဆွတ်နေရရှာတဲ့ မော်ဒယ်မလေး